समृत खरेल बिहीबार, माघ ८, २०७७, २२:३०
नेपालको संविधानको धारा ६१ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले पनि संविधान र संघीय कानुन बमोजिम काम गर्ने हो। त्यसैले विघटन गर्दाका आधार संविधानसम्मत छ/छैन भन्ने बारेमा म केन्द्रित हुन्छु।
संसदीय प्रणालीको मूल्य र मान्यतालाई राष्ट्रपतिको पत्रमा आधार भनेर उल्लेख गरिएको छ। यसमा तीन तर्क छन्। पहिलो- कानुनहरूको एउटा सोपान हुन्छ। संविधान अनि ऐन, नियम। त्यसरी नै मूल्य मान्यताहरूको पनि सोपान हुन्छ। वामदेव गौतमको मुद्दाको फैसलामा संवैधानिक मूल्यमान्यता अरु सबै मूल्यमान्यताभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने फरकमतमा लेखिएको छ। ती मूल्यमान्यताको पनि सोपान हुन्छ र त्यस्ता संवैधानिक मान्यताले अन्य सबै बाझिएका मान्यतालाई निस्तेज र निरस्त गर्छ। संवैधानिक मूल्यभन्दा माथि अरु कुनै हुँदैन।
दोस्रो, कुरा संविधानभन्दा माथि कुनै मूल्यमान्यता त जति पनि होलान् श्रीमान्। तर हामीसँग आज लिखित संविधान छ। लिखित संविधान भएको अवस्थामा संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तमा संविधान माथि कोही हुन्न भनिन्छ। यसको अर्थ सबै कुरा लिखित संविधानकै आधारमा हुन्छ। संविधान सर्जक (क्रिएटर)हो, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संविधानका सिर्जना (क्रिएचर) हुन्। त्यसैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पनि संविधानको सीमाभित्रै रहने हो। संविधानको 'सिर्जना'ले संविधान प्रयोग गरी संविधानले दिएभन्दा ज्यादा अधिकार प्रयोग गर्न मिल्दैन।
तेस्रो कुरा, संविधानपछि बनेका कानुन संविधानसँग बाझिए भने बाझिएको हदसम्म स्वतः बदर हुन्छन्। संविधान बन्नुअघि बनेका कानुन खारेज हुन्छन्।मौलिक हक बाझिएमा बाझिएको हदसम्म संविधान संशोधन नभएसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन्। यो संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलाको मूल्यमान्यता के होला? प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्नुअघि जब संविधान छ भने ती मूल्यमान्यतामा ग्रहण लाग्दछ। लिखित संविधानमा त्यो व्यवस्था भएकाले उनी यसबाट बाहिर छैनन्।
राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा अर्को पनि आधार दिइएको छ। हाम्रो जस्तो संसदीय प्रणाली भएका मुलुकहरूको अनुभवका आधारमा भनिएको छ। संविधान लिखित छ भने, स्पष्ट व्यवस्था छ भने अर्को देशको संविधान हेर्न जानु पर्दैन। गिरिजाप्रसादको बेलाको नजिर हेरे भइहाल्यो नि! त्यो मुद्दामा अन्य मुलुकका परिपाटी हेर्न मिल्दैन प्रष्ट भनेको छ। फेरि अहिले विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले कसरी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास भन्न मिल्छ। २०४७ सालको संविधानमा संसद विघटनको कुरा प्रधानमन्त्रीको अधिकार स्पष्ट लेखिएको छ। व्यवस्थालाई मान्नुपर्ने अनिवार्य हो।
अर्को सर्वज्ञरत्नको मुद्दामा पनि अन्य मुलुकहरूमा कसले कस्तो प्रभुता स्वीकार गर्‍यो भन्ने देखासिकी गर्ने गुञ्जायस संविधानले नदिने व्याख्या गरेको छ। संविधान स्पष्ट छैन भने हेरौं। तर संविधानमा स्पष्ट छ भने संविधानलाई निस्तेज पार्ने गरी अरु मुलुकका अभ्यास भनेर विघटन गर्न मिल्दैन। हेर्ने नै हो भने बेलायतको हेरौं। संसदीय व्यवस्थाको जननीमा पनि 'फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट'को व्यवस्था भइसकेको छ।
राजनीतिक प्रश्न भनेको संविधानमा लेखिएको छैन। कानुनमा पनि लेखिएको छैन। यो कतै लिखित कानुनको विषय होइन। यो अदालतले आफैँ बनाएको हो। आफू समानका अन्य अंगहरूका बीचमा द्वन्द्व सिर्जना नहोस् भन्नका लागि अदालतले सिर्जना गरेको प्रश्न हो। हाम्रोमा जे भएपनि राजनीतिक प्रश्नको दुहाई दिने गरिन्छ। के हो त राजनीतिक प्रश्न? के एउटा व्यक्ति वा राजनीति गर्ने व्यक्तिको बारेमा प्रश्न उठ्दैमा राजनीतिक प्रश्न हुन्छ र? भन्ने प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।
यही सन्दर्भमा अर्को नजिर पनि छ। बालकृष्ण न्यौपानेविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको सिद्धान्त छ- 'संविधान राजनीतिक र कानुनी विषयहरूको समिश्रण भएको साझा दस्तावेज हुँदा यसमा अन्तरनिहीत संवैधानिक वा कानुनी पक्षमा प्रश्न उठाई अदालतसमक्ष ल्याइएको विवादमा राजनीतिक प्रश्नहरू पनि सम्मिलित रहेको र संवैधानिक तथा कानुनी वैधताका प्रश्नको प्रभाव राजनीतिक संविधानवादमा पर्छ भन्ने कुराको आडमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने यस अदालतलको संविधानप्रदत्त संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न सक्दैन' भनिएको छ।
संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दाखेरी राजनीतिक प्रभाव पर्छ। संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र ५ मा व्याख्या गर्दा त नपाउने भन्नेमा पनि प्रभाव पर्छ। संवैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दा राजनीतिक प्रश्नमा पनि प्रभाव पर्छ भने राजनितिक प्रश्नको दुहाई दिएर यो अदालत पछि हट्न नसक्ने नमिल्ने यो नजिरमा स्पष्ट लेखिएको छ।
(प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका कान्छा वकील, २५ वर्षीय समृत खरेलले संवैधानिक इजलासमा गरेको बहसबाट)